Kulamo lagu gorfeynayo 5 cutub oo ka mid ah dastuurka oo ka socda Nayroobi – Kalfadhi
Hay’adaha qaabilsan dib-u-eegusta iyo farsamo u celinta Dastuurka Ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya ayaa wali wada dib u-eegis ay ku sameynayaan cutubyada qaar ee dastuurka la rabo in afti-dadweyne la geliyo sanad kadib. Todobaadkii tagay oo dhan ilaa iyo maanta ayey Guddiyada Dastuurka, oo ay wehliso Wasaaradda Dastuurka, dib u eegayaan cutubyada 11-aad ilaa 15-aad ee Dastuurka Ku-meel-gaarka ah, aqoon isweydaarsi ka dhacaya Nairobi.
Sida uu Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanku baahiyay, waxay arrintaasi daba socotaa shaqo horay looga soo qabtay qeyb ka mid ah dastuurka, oo cutubyadiisa 1-aad ilaa 10-aad ay Guddiyada hadda ka shaqeynaya inta ka dhiman dastuurka dib u soo eegeen, haddana ay ku wadaan shaqo la xiriirta ka saaridda wixii qalad qoraal ah ee ku jira cutubyada horay looga soo shaqeeyey.
Ilaa saddex maalin, oo ay shalay ugu dambeysay, ayey Guddiyadaas oo uu hogaaminayo Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya yeesheen kulamo si qoto dheer loogu lafa-gurayey qabyo tiridda dastuurka. Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanku waxa uu boggiisa Feysbuugga ku sheegay in shalay si gaar ah looga dooday arrinta amniga, oo sida ay sheegtay laga soo saaray cilado ay tahay in dib-u-eegis lagu sameeyo.
Kulankii kaas ka horeeyey ayuu, sidoo kale, Guddigu sheegay in ay Guddiyadu si adag uga doodeen qodobbada ka hadlaya Guddiyada Madax-banaan ee Qaranka, oo uu ka mid yahay Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka wax ka eegaya hadda. Qodobbada ku jira qeybahaas ayuu Guddigu sheegay in khubaro shirka qeyb ka ah ay ku sameeyeen isbarbar-dhig.
Kulamadaas, oo soo bilowday 16-kii bishan, waxay sii socon doonaan ilaa berri oo ay ku began tahay 20-ka Janaayo, 2019. Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hogaaminaya kulamadaan, hase ahaatee waxaa kula lamaanan Guddiga Madaxa-banaan ee Dastuurka, waxaana qeyb ka ah Wasaaradda Dastuurka iyo khuburo laga tala-gelinayo qabyo-tirka Dastuurka Ku-mel-gaarka ah.
Guddoomiye Mursal: Baydhabo kama tagayo ilaa aan ka heshiisiiyo shacabka iyo maamulka KGS